Into esiyenzileyo ukuze sonyuse ukuzibandakanya kwi-Twitter | Martech Zone
Kulo nyaka uphelileyo, sisebenze nzima ekuphuculeni ukuzibandakanya kwethu kwi-Twitter. Endaweni yokuphinda-phinda iincoko kwiibhlog zethu, arhente yentengiso, Itekhnoloji yentengiso, yaye siqu akhawunti, ndigxile kwisicwangciso:
Ndi umhlala phantsi iakhawunti yokubhloga ngokudibeneyo. Ukuthengisa umxholo kugxile kuMartech kutheni abaphulaphuli bam bohlulwe ngoluhlobo? Iifololi ezisebenzisa iblogi yequmrhu kufuneka zijolise ngokubanzi ekuthengiseni.
Ndi Joliswe iakhawunti yentengiso ekwabelaneni ngolwazi lweshishini, amanqaku ethu, iipodcast, iividiyo kunye nolunye ulwazi olufanelekileyo. Ngamanye amaxesha siphinda sabelane ngomxholo othandwayo. I-Twitter ngumjelo, hayi ibhodi yeendaba, ke ukuba unqwenela ukufikelela kubaphulaphuli bakho kufuneka ubekhona xa be… kwaye bahlala bekhona ngalo lonke ixesha.
Iarhente yethu yentengiso, DK New MediaIdilesi igxile emsebenzini esiwenzayo, iindaba kunye nearhente, kunye neziganeko zasekuhlaleni kunye nesisa esisebenza kunye naso.
My siqu Iakhawunti yile-yokwabelana ngomxube wazo zonke ezi zinto zingasentla ngokufefa kobuntu bam nobomi basekhaya ngokunjalo.
Sikwabelana ngemizobo emininzi kwi-Twitter kwaye sisebenzisa indibaniselwano yokwabelana okungcono jetpack kubonelelwe ngeWordPress. Iyasebenza… i Ukuzibandakanya kwebrendi kuyaqhubeka nokukhula kunye nokwabelana kwam buqu kushiye iakhawunti yam icaba. Kungenxa yokuba ndabelana ngezihloko abaninzi abazithintelayo njengezopolitiko kunye nenkolo. Ungakholelwa kwi-hype Kuhleni, yindlela elungileyo yokuphulukana nabalandeli.
Ukuzithengisa okanye ishishini lakho kwi-Twitter yinto onokuyazi ngokulula, kodwa kuya kuthatha ixesha. Ngokwesiqhelo, awuyi kubona ziphumo zintle ezivela kwi-Twitter kwiinyanga zokuqala ezimbalwa zokuba kuyo, kodwa emva kweenyanga ezintandathu ukuya kunyaka, iziphumo kufuneka zibe nkulu. UNeil Patel, ungayinyusa njani i-Twitter yakho yokuzibandakanya nge-324%
Le infographic evela kwi-Sprout ekhawulezayo ibonelela ngengqondo enkulu kunye nezibalo ezinxulumene ne-Twitter. Kubalulekile ukuba uyiqonde loo nto I-Twitter iyaphucula neminikelo yokubandakanyeka, nayo. Ndiyayixabisa ngakumbi indlela uNeil asike ngayo i Nini ukuTweet izibalo phakathi kokuzibandakanya kunye nomthamo. Ndiyakholelwa ngokuqinileyo ukuba uninzi lweenkampani akufuneki zihlale zilungiselela iiyure eziphezulu kwi-Twitter… kodwa kufuneka zijolise xa abaphulaphuli babo bezibandakanya kakhulu.
tags: iiyure ezilungileyo kwi-twitterelona xesha lilungileyo lokuthumela i-tweetIshishini kwi-twitterukuzibandakanya okuphezulu kwi-twitterTwitterUkuzibandakanya kwi-twitterukuba ubhale ntoni kwi-tweet
Okt 28, 2014 ngexesha 2:29 AM
Ndicinga ukuba enye into ebalulekileyo ekufuneka uyiqwalasele ukuba unomdla kuTwitter ukuzibandakanya sisixhobo esizisebenzelayo. Awunakungena kwiakhawunti yakho yeTwitter iyure nganye okanye ukupapasha into. Ke ukusebenzisa isixhobo esifana neBuff, iHootSuite okanye iSocialOoomph kunyanzelekile. Ndiqinisekile ukuba zikhona izixhobo eziphambili ezihambisa oomatshini ukuya kumanqanaba amakhulu kodwa ezo zixhobo kufuneka zenze umsebenzi kwasekuqaleni.
Okt 29, 2014 ngexesha 2:37 AM
Ngokuqinisekileyo ndingumlandeli wezixhobo ezizisebenzelayo!